တရုတ် 500 * 500mm ရင်ပြင်သို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | TUBO
ERW 32mm Tube စက်
ERW 50mm Tube စက်
ERW 76mm Tube စက်
ERW 89mm Tube စက်
ERW 102mm Tube စက်
ERW 127mm Tube စက်
ERW 165mm Tube စက်
ERW 219mm Tube စက်
ERW 254mm Tube စက်
ERW 325mm Tube စက်
ERW 426mm Tube စက်
ERW 508mm Tube စက်
ERW 610mm Tube စက်
ERW 720mm Tube စက်
120 * 120mm တိုက်ရိုက်ရင်ပြင်သို့ဖွဲ့စည်းခြင်း
150 * 150mm ရင်ပြင်သို့တိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်း
200 * 200mm တိုက်ရိုက်ရင်ပြင်သို့ဖွဲ့စည်းခြင်း
250 * 250mm တိုက်ရိုက်ရင်ပြင်သို့ဖွဲ့စည်းသည်
300 * 300mm တိုက်ရိုက်ရင်ပြင်သို့ဖွဲ့စည်းခြင်း
400 * 400mm တိုက်ရိုက်ရင်ပြင်သို့ဖွဲ့စည်း
500 * 500mm ရင်ပြင်သို့တိုက်ရိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း
HF Solid Sate ဂဟေဆော်
TCT Circular Saw Blade များ
သံမဏိ Pneumatic Balers ၏ Pneumatic ပေါင်းစပ်
2 * 1300mm Sltting လိုင်း
သံမဏိ Coil → Uncoiling →ပြားချပ်ချပ် / ညှိခြင်း→ Shear & End ဖြတ်တောက်ခြင်း→ Coil Accumulator → Forming →ဂဟေဆော်ခြင်း→ Deburring →ရေကြဲခြင်း→အရွယ်အစား→ Straightening →ဖြတ်တောက်ခြင်း→ကုန်ပစ္စည်းဇယား
1. round to square နှင့် rectangle ပုံစံလမ်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤနည်းသည် Cross section ၏ပုံသဏ္forာန်အတွက်ပိုကောင်းသည်။ နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတွင်းစိတ်၏ semi semi အချင်းသည်သေးငယ်ပြီးအနားပတ်ပတ်လည်မှာပြားသည်။
သံမဏိအချပ်များ၏အကျယ်သည် ၂.၄ မှ ၃% အကြားရှိစက်ဝိုင်းများထက်စတုရန်း / စတုဂံပုံသို့သေးငယ်ပြီးကုန်ကြမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေသည်။
၄ င်းသည်ဘက်စုံပေါင်းစပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ axial force နှင့်ဘေးထွက်ပွန်းပဲ့ခြင်းများကိုရှောင်ရှားပြီးအရည်အသွေးကိုသေချာစေပြီးဖွဲ့စည်းမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချသည်။ စွမ်းအင်ပမာဏနှင့် roller ပွန်းစားမှုကိုလျှော့ချသည်။
၅။ ပေါင်းစပ်ထားသောကြိတ်စက်အမျိုးအစားများကိုစင်တာအများစုတွင်အသုံးပြုသည်။ roller အစုတစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောစတုရန်း / စတုဂံပုံအရွယ်အစားများအားလုံးထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်သည် roller, bankroll လည်ပတ်မှုမြန်ဆန်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်အတွက်အချိန်တိုတို။
၆။ roller အားလုံးသည်သာမာန်ရှယ်ယာများဖြစ်သည်။ ပြွန်အရွယ်အစားပြောင်းလဲသောအခါ roller ကိုအစားထိုးစရာမလိုပါ။ roller ၏အနေအထားကိုမော်တာ (သို့) PLC ဖြင့်သာညှိနှိုင်း။ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကိုအပြည့်အ ၀ နားလည်သည်။ ၎င်းသည် roller ပြောင်းလဲချိန်ကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။
Rectangular Tube 300 x 200 - 600 x 400 mm
နံရံအထူ 8.0 မီလီမီတာ - 20,0 မီလီမီတာ
ပြွန်အရှည် ၆.၀ မီတာ - ၁၂.၀ မီတာ
လိုင်းမြန်နှုန်း မက်စ် မိနစ် ၆၀
ပုံစံနည်းလမ်း တိုက်ရိုက် Square နှင့် Rectangular Tube သို့ဖွဲ့စည်းခြင်း
မော်ဒယ် စတုရန်းပိုက် (mm) စတုဂံပိုက် (mm) အထူ (မီလီမီတာ) မြန်နှုန်း (m / min)
LW400 40 × 40 ~ 100 × 100 ကို 40 × 60 ~ 80 × 120 1.5 ~ 5.0 20 ~ 70
ရှေ့သို့ သံမဏိ Tube စက်
1. မေး: သင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသလား
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကထုတ်လုပ်သူပါ။ ၁၅ နှစ်ကျော် R&D နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအပြည့်အ ၀ အာမခံရန် CNC စက်ပစ္စည်း ၁၃၀ ကျော်ကိုအသုံးပြုပါသည်။
၂။ Q: ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်လက်ခံပါသလား။
A: ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
3. Q: ကိုးကားထောက်ပံ့ဖို့သငျသညျအဘယျသို့သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်သနည်း
A: ၁။ ပစ္စည်း၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းအား၊
၂. ပိုက်အရွယ်အစားအားလုံးလိုအပ်သည် (mm) ။
၃။ နံရံအထူ (min-max)
4. Q: သင်၏အားသာချက်များကဘာလဲ?
A: ၁။ အဆင့်မြင့်မှိုသုံးသောနည်းပညာ (FFX, Direct Forming Square) ။ ဒါဟာအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုချွေတာ။
(၃) ၁၅ နှစ်ကျော် R&D နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ။
၄. ၁၃၀ စီဒီစီစက်စက်ကိရိယာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအရ 5. စိတ်ကြိုက်။
၅။ မေး။ ။ ရောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာရှိလား။
ဖြေ - ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လူ ၁၀ ယောက် - အထူးကျွမ်းကျင်သောနှင့်ခိုင်မာသောတပ်ဆင်မှုအဖွဲ့ရှိသည်။
A: (၁) တစ်နှစ်အာမခံ။
(၃) ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြဌာန်းခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ ပြည်ပစက်ပစ္စည်းများအတွက်အင်ဂျင်နီယာများထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
(၄) စက်ရုံပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
တိုက်ရိုက်ရောင်းရန် Square သို့ဖွဲ့စည်း
No.8 Xingbei Street, Shiyan Road, Shijiazhuang, Hebei, China ။
123456546 ရှာဖွေရန် Enter ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပိတ်ရန် ESC ကိုနှိပ်ပါ